धादिङ : खनियाबासको उपाध्यक्षमा काे-काे भिड्दै छन् त ? « News24 : Premium News Channel
धादिङ : खनियाबासको उपाध्यक्षमा काे-काे भिड्दै छन् त ?
धादिङ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित खनियाबास गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको चुनाव रोचक हुने देखिएको छ । यस गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन रहेको छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष रणबहादुर तामाङ पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष पदको उम्मेदवार रहेका छन् भने उपाध्यक्ष पदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले युवा नेता सेक्केमान तामाङलाई अगाडि सारेको छ। यस गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष पदका लागि ७ राजनीतिक दल र १ स्वतन्त्र (नेपाली कांग्रेसका बागी) गरि जम्मा ८ जना चुनावी मैदानमा छन्।
गत स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रणबहादुर तामाङ १६४६ मत ल्याइ विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का प्रदिप फ्युवाले ९७१ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, उपाध्यक्ष पदमा १६६५ मतका साथ नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार योमाया तामाङ विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)की सुष्मा तामाङले ९१७ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।
गठबन्धनका उम्मेदवार सेक्केमान तामाङ गत स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार थिए । त्यतिबेला अहिलेका गठबन्धनका अध्यक्षका उम्मेदवार रणबहादुर तामाङले निर्वाचन जितेका थिए। सेक्केमान उत्तरी धादिङका लोकप्रिय युवा मानिन्छन् । राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका तामाङले शिक्षा , स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन् । दर्जनौं विद्यार्थीको पठनपाठनमा सहयोग गर्दै आएका तामाङ नेकपा (माओवादी केन्द्र), धादिङको जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य र खनियाबास गाउँपालिकाको इञ्चार्ज समेत हुन् । यसपटक खनियाबासका मतदाताले उपाध्यक्षमा आफूलाई जिताउनेमा उनी ढुक्क देखिन्छन् । गठबन्धनका साझा उम्मेदवार भएको , लोकप्रिय र सामाजिक छवि राम्रो भएकाले उनी उपाध्यक्षको सबैभन्दा शक्तिशाली उम्मेदवार मानिन्छन् ।
नेकपा (एमाले)ले खनियाबास गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा खुपीकुमारी तामाङलाई अगाडि सारेको छ । उनी नेकपा (एमाले), धादिङको जिल्ला कमिटी सदस्य तथा खनियाबास गाउँ कमिटीको उपाध्यक्ष हुन्। नेकपा (एमाले) निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी तामाङ उपाध्यक्ष पदकी सशक्त महिला उम्मेदवार हुन् ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नदिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले फुरबहादुर तामाङलाई उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी त्यस क्षेत्रको प्रभावशाली व्यक्ति मानिन्छन् । पूर्व शिक्षक समेत रहेका फुरबहादुर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खनियाबास गाउँ कमिटिका अध्यक्ष समेत हुन् ।
खनियाबास गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदकी अर्की उम्मेदवार निकिता वाइबा रहेकी छिन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार रहेकी वाइबा जसपा , धादिङको जिल्ला कोषाध्यक्ष समेत हुन् । उनी त्यस क्षेत्रकी चर्चित महिला नेत्री मानिन्छन् । वाइबालाई उपाध्यक्षको बलियो उम्मेदवार मानिन्छ ।
तामाङ बाहुल्य रहेको यस गाउँपालिकामा उपाध्यक्षका सबै उम्मेदवारहरू तामाङ रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मरियम तामाङ, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट ममता तामाङ , मसिहा पार्टीबाट रामबहादुर तामाङ र स्वतन्त्रबाट सरिता तामाङ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरू हुन् ।